आफूले गर्दा ठिक, अरुले गर्दा नौटंकी – Mero Film
आफूले गर्दा ठिक, अरुले गर्दा नौटंकी
रेखा थापा यस्ती अभिनेत्री हुन्, जसलाई आफूले गर्दा त्यो ट्रेन्ड बसाले भन्ने लाग्छ । अरुले गर्दा गल्ती गरे भन्ने पनि लाग्छ ।
रेखा थापा आफ्नो फिल्म चल्दा हलमा सधै पुग्थिन् । उनी हलमा दर्शकसँग सेल्फी खिच्न, हल भित्रै गएर दर्शकसँग साक्षात्कार गर्न अघि थिइन् । तर, अहिले पनि रेखालाई यो कुरा नौटंकी लाग्न थालेको छ । रेखाले हलमा फिल्म चलेको बेलामा जानुलाई नौटंकी बताएकी छन् ।
तर, हलमा पुगेर सेल्फी लिने कुराको सुरुवात त उनै रेखाले नै गरेकी हुन् । रेखा थापा दर्शक हलमा भिड लाग्दा हलमा पुगेर आफू हिट भएको साबित गर्न लालयित थिइन् । अहिले भने उनलाई अन्य कलाकार हलमा पुग्नु नौटंकी हुन थालेको छ ।
रेखाको अहिले मालिका फिल्म चलिरहेको छ । मालिका फिल्म हेर्न कुमारी हल पुगेका दर्शकसँग उनले सेल्फी लिएको फोटो पनि छ । तर, रेखा किन अरुलाई हलमा पुग्दा नौटंकी गरेको भन्ने सोचिरहेकी होलिन् ।
दर्शकले कलाकारसँग सिधै साक्षात्कार गर्ने भनेकै फिल्म चल्ने बेलामा हो । दर्शक र कलाकारको कनेक्शन हुने मौकालाई नौटंकी भन्न सुहाउला र ? कि आफूले बनाएका र काम गरेका फिल्म चल्न छाडेपछि, हलमा दर्शकको भीड हुन छाडेपछि रेखालाई यो नौटंकी लागेको हो ? आफूले गर्दा ठिक, अरुले गर्दा नौटंकी सोच्नु एउटी पुरानी अभिनेत्रीका लागि शोभनिय भयो र ?
२०७५ कार्तिक १९ गते ११:२८ मा प्रकाशित